Night Filter - အိပ်ရေးကောင်းခြင်းအတွက်အပြာရောင်အလင်းရောင်စစ်ထုတ်ခြင်း Android အတွက်ဒေါင်းလုပ် APK
ပင်မစာမျက်နှာ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » ညဥ့် Filter ကို - သည် သာ. ကောင်း၏အိပ်စက်ခြင်းများအတွက်အပြာရောင်အလင်း Filter ကို
Night Filter - အိပ်စက်ခြင်းအတွက် Blue Light Filter APK
မြင်ကွင်းကထုတ်ပေးတဲ့အပြာရောင်အလင်းကအလိုအလျောက်ဖြစ်လိမ့်မယ် အမြင်အာရုံကျန်းမာရေးကိုအယှက် ဤသို့ သင့်ရဲ့အိပ်စက်ခြင်းကိုနှောင့်ယှက်။ Night Filter ကအိပ်စက်အနားယူရန်ကူညီသည် နူးညံ့သိမ်မွေ့နွေးအလင်းပေး မျက်စိပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုလျှော့ချရန်။ အသုံးပြုရန်ရိုးရှင်းသေးထိရောက်သောထက်ပို! Key ကိုအင်္ဂါရပ်များ
★ပေး ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မျက်စိကျန်းမာရေးအကဲဖြတ် ကောင်းသောအလေ့အထများကိုဖော်ထုတ်ရန်၊
★၏အပိုင်၌ အရောင်အစီအစဉ်များအမျိုးမျိုး 24 နာရီမျက်စိစောင့်ရှောက်မှုပေးခြင်း၊
Blue Light filter သည်သင်၏မျက်လုံးများကိုကာကွယ်ပေးသည် မျက်နှာပြင်ကိုသဘာဝအရောင်နှင့်ညှိခြင်း နှင့် အန္တရာယ်ရှိသောအပြာအလင်းကိုလျှော့ချ။ သင်၏ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်လျှောက်သောအခါပြောင်းလဲမှုကိုသင်ခံစားရနိုင်သည်။ သင်သည်ညအချိန်တွင်စာဖတ်ခြင်း၊ စာရိုက်ခြင်း၊ ဂိမ်းကစားခြင်းတို့တွင်မျက်စိမျက်စိကွယ်နိုင်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Blue Light Filter app ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ
အဆင့်တစ်: အက်ပ်ကိုဖွင့ ်၍ Filter ကိုဖွင့်ပါ။
အဆင့်နှစ်: သင်၏ Filter Color ကိုရွေးချယ်ပြီး Auto Enable Time ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
အဆင့်သုံး: သင်၏ Eye Health Report စစ်ဆေးရန်နှင့် Reminder option ကိုစစ်ဆေးရန်ညာဘက်အပေါ်ထောင့်ကိုနှိပ်ပါ။ Show Notification ကိုသက်ဝင်သည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်လိုချင်သည့်အချိန်တွင် notification bar ရှိ filter ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
A: အပြာရောင်အလင်းသည်နည်းပညာအမျိုးမျိုးမှလာသည့်မြင်နိုင်သောအလင်းရောင်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည် ကွန်ပျူတာများ၊ စမတ်ဖုန်းများ၊
A: မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်လူတို့၏အလင်းရရှိသည့်အချိန်အပေါ်တွင်များစွာမူတည်သည်။ နေ့အလင်းရောင်တွင်သဘာဝအလင်းရောင်သည်ထိတွေ့မှုကြောင့်လူများ၏စွမ်းအင်၊ သို့သော် ညနေခင်းတွင်မျက်နှာပြင်စက်များမှတစ်ဆင့်ထုတ်လွှင့်သောလှိုင်းများကိုကြာမြင့်စွာထိတွေ့ခြင်းသည် circadian rhythm ကိုပျက်စီးစေနိုင်သည် နှင့်ပုံမှန်အိပ်စက်ခြင်းအချိန်ဇယားအတွက်နှောင့်အယှက်အပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
A: အပြာအလင်းနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်နှလုံးခုန်နှုန်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုမြင့်တက်စေနိုင်ပြီး circadian rhythm ကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ညအိပ်ရာမဝင်ခင်အိပ်မပျော်စေရန်ညဘက်အိပ်ချိန်ကိုလျှော့ချသင့်သည်။
1 ။ Kuse, Yoshiki; Ogawa, Kenjiro; Tsuruma, Kazuhiro; Shimazawa, Masamitsu; Hara, Hideaki (2014-06-09) "diode - ဆင်းသက်လာအပြာအလင်းကိုထုတ်လွှတ်ယဉ်ကျေးမှုအတွက် photoreceptor- ဆင်းသက်လာဆဲလ်များ၏ပျက်စီးမှု" ။ သိပ္ပံဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများ။ 4: 5223 ISSN 2045-2322 PMC 4048889 လွတ်လပ်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ PMID 24909301 ။ Doi: 10.1038 / srep05223
2 ။ Tosini, Gianluca; ဖာဂူဆန်, မှ Ian; Tsubota, Kazuo (2016-01-24) "အပြာအလင်း၏ circadian system နှင့်မျက်စိဇီဝကမ္မဗေဒအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ" ။ မော်လီကျူးအမြင်။ 22: 61-72 ။ ISSN 1090-0535 PMC 4734149 လွတ်လပ်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ PMID 26900325 ။
3 ။ Tosini, Gianluca (2016) ။ "အပြာအလင်း၏ circadian system နှင့်မျက်စိဇီဝကမ္မဗေဒအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ" ။ မော်လီကျူးအမြင်။ 22: 61
4 ။ Korones စာရာ "အပြာရောင်အလင်းနှင့်အိပ်စက်ခြင်းည။ " စိတ်ပညာယနေ့ 45.1 (2012): 42 ။ ကျန်းမာရေးအရင်းအမြစ် - စားသုံးသူ Edition ။ ဝက်ဘ်။ 21 ဖေဖော်ဝါရီလ 2016
သင့်တွင်မေးခွန်းများသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်များရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားအီးမေးလ်ဖြင့် filter@cootek.cn သို့အခမဲ့ဆက်သွယ်ပါ
အင်္ဂလိပ်၊ ဂျာမန်၊ စပိန်၊ ပေါ်တူဂီ၊ ပြင်သစ်၊ ရုရှား၊ ထိုင်း၊ ကိုရီးယား၊ ဂျပန်၊ ရိုးရာတရုတ်၊
Samsung ရဲ့ Galaxy S8 နှင့် S8 Edge, Samsung ရဲ့ Galaxy 8 မှတ်ချက်, Samsung ရဲ့ Galaxy A8 + ကို Samsung က Galaxy S7 နှင့် S7 Edge;
Huawei က P10 နှင့် P10 Plus အား, Huawei ကအိမ်ထောင်ဖက် 10, Huawei က P9, Huawei ကအိမ်ထောင်ဖက် 9, Huawei ကဂုဏ်ပြု 8;
HTC က U11 + ကို HTC U11 ဘဝ, Pro ကိုကို HTC Desire 10;
9 OPPO Find; OPPO F5;
Xiaomi က Max2, Xiaomi က 6;
ဂုဏ်အသရေ 7X, ဂုဏ်အသရေအမြင် 10, ဂုဏ်အသရေ9Lite ကို;
Google Pixel, Google Pixel2; LG S6
Night Filter - အိပ်ချိန်ပိုကောင်းရန်အတွက် Blue Light Filter
10.58 ကို MB
ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ - ကြံ့ခိုင်ရေး၊ မျက်လုံးကာကွယ်စောင့်ရှောက်၊ ရေသောက်ပါ။
အပြာရောင်အလင်း Filter ကို ...
အပြာရောင်အလင်း Filter ကို Pro ကို